नुरियाको उपत्यकामा यात्रा | यात्रा समाचार
España यसमा अविश्वसनीय गन्तव्यहरू छन् र यदि तपाइँ प्रकृति र बाहिरी पर्यटन मनपराउनुहुन्छ भने तपाईं क्याटालोनियाको गेरोना प्रान्तमा जान सक्नुहुन्छ, र भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ नुरिया उपत्यका। यो एक सुन्दर र हरियो घाटी हो जुन लगभग दुई हजार मिटर उचाईमा छ र राख्छ नुरियाको भर्जिनको अभयारण्य।
यो एक ठाउँ हो जहाँ तपाईं दुबै गर्मी र जाडोमा भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले यदि तपाईंले अझै पनि आफ्नो जाडोका बिदाहरू वा क्रिसमस गेटवेको योजना गर्नुभएको छैन भने, तपाईंलाई यो स्पेनी पोष्टकार्डको बारेमा के सोच्नुहुन्छ?
1 नुरियाको उपत्यका
2 Núria घाटीमा के गर्ने
हामीले भनेझैं, यो लगभग छ समुद्र सतह भन्दा दुई हजार मिटरr, गिरोना पायरेनीसमा, Qurabls नगरपालिकामा, Ripoll regions क्षेत्र। यो पूर्वीय स्की रिसोर्ट यहाँ वरिपरि र वास्तव मा, यदि तपाइँ लाई मनपर्दछ पारिवारिक वातावरण यो एक धेरै राम्रो र सिफारिश गरिएको जाडो गन्तव्य हो।
स्की रिसोर्ट निर्माण हुनु अघि, नुरियाको भर्जिनको अभयारण्य। परम्परा भन्छन् कि सान गिलएथेन्समा जन्म भएको XNUMXth औं शताब्दीका सेनोबाइट, जो स्पेन आएका थिए र मठाका थिए, चार वर्षसम्म ती देशहरूको यात्रा गरे र कुमारीको मूर्ति बनाए जुन उनले गुफा भित्र लुकाए जब उनले अरबहरूबाट भाग्नुपर्‍यो। उसको क्रूस त्यहाँ छोडियो, घण्टी उसले आफ्ना गोठालाहरूलाई बोलाउँथ्यो र भाँडा जसमा उसले पकायो।
वर्षौंपछि, १०1072 in मा, पहिलो तीर्थयात्री डाल्मटियाबाट आइपुगे, ती कुमारीलाई खोज्दै, र एउटा घर निर्माण गरे। स्पष्टतः उनले क्रस, भाँडो र घण्टी भेट्टाए र सबै थोरै चर्चमा लगे। यहाँ भर्खरियाको भर्जिनको अभयारण्य जन्म भएको थियो।
आज उपासना गरिएको क्रस वास्तवमा १२ औं वा १ XNUMX औं शताब्दीमा नक्सा बनाइएको छ, रोमान्सेक शैलीमा र काठमा, घुँडामा भर्जिन र बच्चाको साथ। त्यहाँ भाँडो र घण्टी पनि छ र परम्पराले स indicates्केत गर्दछ कि केटीहरू राख्न चाहने महिलाले भाँडामुनि आफ्नो टाउको राख्छ र घण्टी बज्दछ। प्रत्येक वांछित बच्चाको लागि एक औंठी। क) हो, नूरियाको भर्जिनलाई प्रजनन क्षमताको संरक्षक मानिन्छ र २० औं शताब्दीको s० को दशक पछि यो पनि हो स्कीयर संरक्षक.
यद्यपि त्यहाँ अन्य निर्माणहरू भए, हालको चर्च १ 1911 ११ को हो, पछि होटल र भिया क्रुक्सिसको मार्ग निर्माण गरियो। २० औं शताब्दीको दौडान स्पेनको राजनैतिक उतार चढावले यस क्षेत्रको भविष्यलाई परिवर्तन ग and्यो र भर्जिनको छवि फ्रान्स र पछि स्विजरल्याण्डको यात्रामा मिलिजाइमियनको आक्रमणबाट बच्न गयो।
सत्य यो हो कि आज यस परिसरमा चर्च, होटल र केही अन्य घरहरू छन् जसमा तीर्थयात्रीहरू छन्। तपाईं यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ फ्युनिकुलर-रैक रेलवे प्रयोग गरेर FGC समूहबाट, यसलाई Ribes de Freser वा Queralbs बाट लिदै। यसको उद्घाटन १ 1931 inaugurated१ मा भएको थियो र पछि केहि विस्तारहरू पनि थिए।
एक्लै बाह्र किलोमिटर यात्रा केवल एक हजार मिटरको एक ढलानमा पार गर्नु र यात्रा ईश्वरीय हो, विशेष गरी तपाईसँग भएको छवि जब तपाईं ताल, पर्वतहरू र अभयारण्यहरू, सबै सँगै सँगै आउँदा हुन्छ।
दरहरु? तिनीहरू मूल र गन्तव्यमा निर्भर गर्दछन्, उदाहरणका लागि: नुरिया / क्वर्बल्स र नेरिया / रिबेसको एक तर्फी यात्राको लागि करिब २ 25 यूरो राउन्ड ट्रिप र १ 16 यूरो लाग्छ। यदि तपाईं नाबालिग हुनुहुन्छ वा 643भन्दा बढी, दरहरू कम छन्। त्यहाँ सीजन टिकटहरू छन् र केबल कारको लागतeयूरो छ यदि तपाईंसँग पहिले नै ट्रेन टिकट छ।
र यदि तपाइँ उहाँ हुनुहुन्न दिन यात्रा त्यसो भए तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अभयारण्य- स्की रिसोर्टमा राति बस्नुहोस्í। उपत्यकाको स्की रिसोर्टलाई भल दे नुरिया भनिन्छ र छ एघार स्की ढलानहरू अल्पाइन र स्लेजका लागि एक। यो बार्सिलोना र गिरोनामा एकदम नजिक छ, कारबाट केवल एक घण्टा टाढा। स्की रिसोर्टको आधार एक उपत्यकामा समुद्री सतहबाट १ 1900 ०० मिटर माथि छ र जम्मा .7. kilometers किलोमिटर ढलानहरू छन्।
Núria घाटीमा के गर्ने
तपाईं जान सक्नुहुन्छ स्कीइ तर तपाईं अन्य चीजहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यदि स्किइ your तपाईको चीज हो भने तपाई अचम्म मा चल्नुहुनेछ कि सबै कुरा कत्तिको व्यवस्थित गरिएको छ। जब तपाईं ट्रेनबाट ओर्लिनुहुन्छ तपाईंसँग पिकनिक क्षेत्र छ जहाँ लकरहरू र परिवर्तन गर्न कोठाहरू र उपकरणहरू भाँडामा भण्डार गर्न यदि तपाईं यो छैन भने। पनि स्नोबोर्ड र स्की स्कूल र सार्वजनिक सेवाहरू।
त्यहाँबाट तपाईं ला पाला चरिलीफ्टमा जानुहुन्छ जुन तपाईंलाई सिधा स्टेशनको उच्चतम भागमा पुग्छ र त्यहाँ कोमा डेल क्लोट गोन्डोला पनि छ जुन तपाईंलाई छोडेर जान्छ Pic de l'Àliga होस्टल। ती स्टेशनको यातायातको माध्यम हुन्।
भल्ल डि नरियाको सब भन्दा लामो ट्र्याक लेस क्रियस हो, जुन १ 1752२ मिटर लामो छ र लगभग 300०० मिटरको ड्रप छ। तपाईं मुलेरेस तल पनि जान सक्नुहुन्छ, रातो कोटीको ट्र्याक तर एक किलोमिटर लामो र अर्को जस्तो सजीलो छैन।
साथै, विज्ञहरूका लागि, त्यहाँ पाला बेस्टीआ ट्र्याक छ, कालो कोटी, जुन सुरू हुन्छ र अन्य दुईको समान ठाउँमा समाप्त हुन्छ तर शीर्षमा एक चिसो झुकाव छ। अर्को कालो ट्र्याक पाला बोजा हो र दुई अन्य रातो ट्र्याकहरू डेल बाक र सोलिया हुन्, नरम र यति सीधा छैन। हो त्यहाँ अन्य मध्यवर्ती ट्र्याकहरू छन्।
Pic de l´Àliga होस्टलमा केही बेर रोकिनु आवश्यक छ किनभने दृश्यहरू अद्भुत छन्। यहाँ पनि छ snowpark र केही हदसम्म यस बिन्दुबाट शुरुवातको लागि क्षेत्र हो। हरियो रनहरू आइना र फिनस्ट्रेल्सको हुन्, करिब 400०० मिटर वा सोभन्दा माथि, र त्यहाँ केवल सय मिटरको रक माला ट्र्याक छ।
सत्य यो हो कि स्कीइ toको अतिरिक्त तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ हिउँदानी सर्कीट, आइस डाइभिंग, तीरंदाजी, sleight सवारी, zip लाइनहरु, लघु गोल्फ, गोन्डोला सवारी, घोडा वा टट्टू पर्यटन, एक फार्म, पैदल यात्रा, डु boat्गा वा तालमा डु on्गा यात्रा...
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » España » नुरियाको उपत्यकामा यात्रा